1. Soo bandhiga goobta.
Under article 6 of Law No. 2004-575 ka 21 2004 June waayo kalsoonida dhaqaalaha digital, waxaa lagu tilmaamaa by users website www.comme-un-pro.fr aqoonsiga daneeyayaasha kala duwan oo qayb ka ah hirgelinta iyo kormeerka:
daabacaadan masuul ka : Tranquillus -tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Maareeyaha daabacan waa qof dabiici ah .
ciidankii : WP SERVER SARL, waa shirkad lagu soo daray sharciga Faransiiska oo leh raasamaal dhan € 10000, oo lagu doorto guri 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes, oo ka diiwaangashan RCS of Nîmes lambarka 808 840 474, lambarka VAT FR86808840474, oo uu wakiil ka yahay maamuleheeda sharciga Fabrice Ducarme
2. Xaaladaha guud ee isticmaalka goobta iyo adeegyada la bixiyo.
Isticmaalka goobta comme-un-pro.fr waxay qeexaysaa oggolaanshaha buuxa ee shuruudaha iyo shuruudaha hoos lagu faahfaahiyay. shuruudahan isticmaalka waa la bedeli karaa waqti kasta, dadka isticmaala ee goobta waxaa lagula talinayaa in ay si joogto ah iyaga la tasho.
goobta comme-un-pro.fr wuxuu adeegsadaa dhammaan hababkeeda si ay u hubiso macluumaad la isku halleyn karo iyo sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah. Si kastaba ha noqotee, khaladaad ama dhaafitaan ayaa dhici kara. Isticmaalayaasha internetka waa inay sidaa darteed hubiyaan sax ahaanta macluumaadkooda, oo loogu talagalay macluumaadka oo keliya, aysan ahayn mid dhammaystiran oo ay mas'uul ka tahay inay beddelaan ama horumariyaan ogeysiis la'aan.
Comme-un-pro.fr ma ahan mas'uul ka ah isticmaalka laga sameeyey macluumaadkan, iyo wax kasta oo toos ah ama aan toos ahayn ee keeni kara.
cookies : Barta comme-un-pro.fr ayaa ku weydiin karta inaad aqbasho cookies-ka loogu talagalay xayeysiinta, tirakoobka iyo ujeedooyinka muujinta. Cookie waa macluumaadka ay ku dhejiso darawalkaaga adeegaha goobta aad booqanayso oo loo isticmaali karo in laguula socdo. Waxay ka kooban tahay dhowr qaybood oo xog ah oo ku kaydsan kombuyuutarkaaga fayl qoraal fudud oo serverku marin u helayo si uu u akhriyo una keydiyo macluumaadka. Qeybo ka mid ah boggan ma shaqeyn karaan iyada oo aan la aqbalin cookies.
Si aad u tirtirto cookies-ka lagu rakibay kombuyuutarkaaga, halkan waxaa ku yaal bogga macluumaadka ee daalacashada waaweyn:
Link links hypertext: Comme-un-pro.fr waxaa laga yaabaa inay bixiso isku-xiryo bogag kale ama ilo kale oo laga heli karo internetka. Comme-un-pro.fr kama jawaabin ama damaanad qaadin helitaanka goobahaas iyo ilaha kale ee banaan. Laguma qaadi karo masuul ka ah wixii waxyeello ah nooc kasta oo kasta oo ka dhasha mawduucyada boggaan ama ilaha dibadda, oo ay ku jiraan macluumaadka, badeecadaha ama adeegyada ay bixiyaan, ama isticmaalka wax laga qaban karo walxahan. Khatarta la xidhiidha isticmaalkan ayaa ah mas'uuliyadda buuxda ee isticmaalaha, kuwaas oo u hoggaansamaya shuruudaha isticmaalka.
Helitaanka: Goobta waxaa la cusboonaysiiyaa wakhtiyo kala duwan sanadka, laakiin si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa in aan la heli karin. Haddii aad aragto dalool, khalad ama waxa u muuqda cillad, fadlan ka warbixi email, cinwaanka tranquillus.france@comme-un-pro.fr, oo sharxaya dhibaatada sida saxda ah ee suurtogalka ah (bogga soo bandhigaya dhibaatada, nooca kombuyuutarka iyo browser loo isticmaalo, ...).
Qodob kasta oo la soo dejiyey wuxuu ku jiraa khatarta qofka isticmaalkiisa iyo mas'uuliyad kaliya. Natiijo ahaan, comme-un-pro.fr lagama qaadi karo mas'uul ka ah waxyeello kasta oo ka yimaada kombuyuutarka user ama wixii lumay xogta oo laga soo qaatay soo dejinta. Intaa waxaa dheer, isticmaalaha goobta wuxuu ogolaanayaa inuu galo goobta adeegsiga qalab dhawac ah, oo aan ku jirin fayrusyo iyo shabakad jadwalka ugu dambeeya.
Hantida caqliga leh:
Dhammaan waxyaalaha ku jira boggan comme-un-pro.fr, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidneyn, sawirada, sawirrada, qoraalka, fiidiyoowga, filimka, dhawaaqa, calaamadaha, gifsiyada iyo astaamaha iyo qaabka ay yihiin hantida gaarka ah ee goobta comme-un-pro.fr marka laga reebo calaamadaha ganacsiga, logos ama content ka tirsan shirkadaha kale ama qorayaasha.
Soo saarid, qaybin, wax ka beddelid, ku-beddelid, dib-u-noqoshada ama daabacaadda, xitaa qeyb ahaan, qodobadani si adag ayaa loo mamnuucayaa iyadoon qoraal cadaan ah comme-un-pro.fr. Wakiilkan ama dhalmo ahaan, wax kasta oo macnaheedu yahay, waxa uu ka dhigayaa xad-gudub lagu ciqaabayo Qodobbada L.335-2 iyo raacitaanka Xeerka Aqoonta Caqliga. Haddii la raaci waayo mamnuuc taasi waxa ay keenaysaa xadgudub ah oo keeni karta in ciqaabta madaniga iyo dambiilaha. Intaa waxaa dheer, milkiilayaasha oo ka mid ah waxyaabaha soo guuriyeen keeni kara tallaabo sharci ah idinka gees ah.
Sida laga soo xigtay 78 17 soddog u ahaa January 6 1978 (beddelay sharciga 2004-801 6 of August 2004 on ilaalinta shakhsiyaadka la xiriira nidaaminta xogta shakhsiga ah) oo la xiriira xogta, files iyo xorriyaadka, this site ahaa mawduuca dhawaaqista (lambarka 2169132) Guddiga Qaranka ee Warbaahinta iyo Xoriyada (www.cnil.fr).
Guud ahaan, looma baahna inaad na siiso xogtaada shakhsi ahaaneed markaad booqato degelkeenna.
Si kastaba ha noqotee, mabda'ahaani wuxuu leeyahay qaar ka reeban Xaqiiq ahaan, adeegyada qaarkood oo ay bixiso boggayaga, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad na siiso xog gaar ah sida: magacaaga, shaqadaada, magaca shirkadaada, cinwaanka emailkaaga, iyo lambarka taleefankaaga. Tani waa kiiska marka aad buuxiso foomka laguugu soo bandhigay internetka, qaybta " kala soo xiriir ".
Si kastaba ha ahaatee, waad diidi kartaa inaad bixiso xogtaada shakhsi ahaaneed. Xaaladdan, ma awoodi doontid inaad isticmaasho adeegyadda goobta, sida xog ururinta, ama helista waraaqaha.
Ugu dambeyntii, waxaa laga yaabaa inaan ururiyo macluumaad gaar ah si toos ah marka aad on navigation fudud on our website, oo ay ku jiraan: warbixin ku saabsan isticmaalka our site, sida meelaha aad soo booqato iyo adeegyada ay helaan aad, cinwaanka IP, nooca bartaada, wakhtiyada aad heleyso.
Macluumaadka noocan oo kale ah waxaan u isticmaalnaa annaga iyo la-hawlgalayaashayada ujeeddooyin xayeysiin ah, tirakoob gudaha ah, si kor loogu qaado tayada adeegyada lagu siiyo. Macluumaadka waxaa ilaaliya qodobbada sharciga ee 1-dii Luulyo 1998-dii oo lagu beddelayo Amarka 96/9 ee 11-ka Maarso 1996, XNUMX ee ku saabsan ilaalinta sharciga ee keydka macluumaadka.
Iyadoo la tixraacayo 38 oo soo socda oo ka mid ah 78 17 soddog u ahaa January 6 1978 la xiriira xogta, files iyo xorriyaadka, user kasta wuxuu xaq u leeyahay helitaanka, sixitaan, baajinta iyo mucaaradka si ay xogta shakhsiga ah.
Si aad u adeegsato xuquuqdaan, u dir codsigaagaomme-un-pro.fr email ahaan: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaalaha goobta comme-un-pro.fr waxaa la daabacay iyada oo aan la ogeyn isticmaalaha, beddelay, loo wareejiyay, loo qoondeeyey ama lagu iibiyey taageerada dhinac kasta oo saddexaad. Kaliya malaha malaha dib u furashada goobta comme-un-pro.fr iyo xuquuqdiisa ayaa u oggolaan doonta gudbinta macluumaadka la sheegay iibiyaha suurtagalka ah kaas oo isna ku xirnaan doona isla waajibaadka kaydinta iyo wax ka beddelka xogta ee la xiriira adeegsadaha goobta comme-un-pro.fr.
Xaaladaha xaadirka ah ee goobta comme-un-pro.fr waxaa u taliya dowlada sharciga Faransiis iyo muran ama khilaaf laga yaabaa in kac ka fasiraadda ama dil oo ka mid ah noqon doona awoodda gaarka ah ee maxkamadaha Faransiis kasta, waxaa la dhigay awood gaar ah oo ka mid ah maxkamadaha awoodda u leh ee Paris. luqadda tixraaca ee dejinta dhaaranay iman kara, waa Faransiis.